ဥာဏ်စမ်းလေး ဖြေကြည့်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ဥာဏ်စမ်းလေး ဖြေကြည့်ပါ
Posted by Mobile House on Aug 14, 2011 in Education, Entertainment | 17 comments
သိပြီးသားသူတွေလဲ သိကြမှာပါ ။အပျင်းပြေ ဖြေ ကြည့်ပေါ့  …..
၁။ နတ်ရေကန်လေးကန် နဲ့ ဘုရားလေး ဆူ ရှိတယ် ။ဘုရားတစ်ဆူဆီရှေ့ မှာ နတ်ရေကန် တစ်ကန်ဆီရှိ တယ်။နတ်ရေကန် ထဲ ပန်းနစ် လိုက်ရင်နှစ်ဆ ပွားတယ် ။ ဘုရား အကုန် အညီအမျှ လှူ ဖို့ ဘယ်နှစ်ပွင့် ယူလာပြီး ဘယ်နှစ်ပွင့် လှူမလဲ ။
၂။ ရွှာနှစ်ရွှာ ရှိတယ်။တစ်ရွှာမှာ ကပန်းသီး က ၁ကျပ်နဲ့ဝယ်ရတယ် ။ဟိုဘက်ရွှာကို ရောင်းမယ်ဆို ၂ကျပ်ရတယ်။ လှည်း ၂ စီးရှိတယ် ။တစ်စီး ကို ပန်းသီး၅၀ ဆန့်တယ် ။လမ်းမှာဂိတ် တွေက ကုန်သွယ်ခွန်အနေ နဲ့ လှည်းတစ်စီး ကို ပန်းသီး၁လုံးပေးရတယ် ။ဂိတ် က ၅၀ ရှိတယ် ။ဘယ်လိုမြတ်အောင် သယ်မလဲ ။
၃။ ဆရာမက အိမ်ကနေပန်းသီး အလုံး၅၀ယူလာတယ် ။သူ့ အခန်းကကျောင်းသား အယောက် ၅၀ ရှိတယ် ။အယောက်စိ ဝေပြီးတဲ့အချိန်မှာ ခြင်းထဲမှာ ပန်းသီး တစ်လုံးကျန်ရမယ် ။ဘယ် လိုဝေ မလဲ ။
၄။ ၁ကနေ ၁၀၀၀၀၀ အထိ ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ ၊ဂဏန်းပေါင်းစက် မသုံးပဲ ဖြေပေးပါ ။(ဥပမာ – ၁+၂=၃+၃=၆+၄=၁၀) ….၁+၂+၃+၄+…=?
၅။ ၀က်သားရောင်းတဲ့ သူက သူ့ဆီက သံကို ၁ ကျပ်သား ကနေ ၁၀ ကျပ်သားထိ ချိန်လို့ရတဲ့ အလေး သုံးပြား လုပ်ချင်နေတယ်။မလုပ်တက်လို့လုပ်ပေးပါအုံး။
ဖြေကြည့်နော် ။အကုန်ဖြေနိုင်ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ် ။
၅။ ၁ကျပ်သား ၃ကျပ်သား ၆ကျပ်သား အလေးတွေလုပ်ပေးလိုက်ပါ……
၂။ ဂိတ် ၂၅ ခု ကျော်ပြီးရင် နှစ်လှည်းက ပန်းသီးတွေကို တလှည်းထဲ စုထည့်လိုက်ပါ နောက်ဂိတ်တွေမှာ တလုံးပဲ ပေးရတော့မှာပါ
moe thida soe ဖြေတာမှန်ပါ တယ် ။
၁။ စယူသွားရင် ၁၅ ပွင့်၊ တဆူကို ၁၆ပွင့်လှူမယ်။
၂။ အနည်းဆုံးမြတ်ချင်ရင် တစီးကိုအနည်းဆုံး၂၆လုံးနဲ့နှစ်စီးပေါင်း ၇၆ လုံး တင်သွား ၊ အများဆုံးမြတ်ချင်ရင် တစီးကို ၅၀လုံးတင်သွား၊ ၂၅ ဂိတ်ကျော်ရင် ၂စီးထဲကဟာ တစီးထဲပေါင်းတင်ရန်။
၃။ ကျောင်းသား၅၀ကို ၈၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂ ယောက်ဆိုပြီး အုပ်စု ၅စုခွဲ ၊ ၁၀ ယောက်ထက်နည်းတဲ့အုပ်စုကို ကျောင်းသားအရေအတွက်ထက် ၁ လုံးပိုပေး၊ ၁၀ယောက်နဲ့ အထက်အုပ်စုကို ကျောင်းသား အရေးအတွက်ထက် ၁ လုံးလျှော့ပေး။
၄။ ၁၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀/၂ = ၅၅၀၀၀၀၀၀၀၀
၅။ ၁ကျပ်သား ၊ ၂ကျပ်သား ၊ ၇ကျပ်သား
နံပါတ် ၄ က မှားသွားတယ်
၄။ ၁၀၀၀၀၁၀၀၀၀၀/၂= ၅၀၀၀၀၅၀၀၀၀
၃ ပဲ မှားတယ် ။တော်ပါတယ် ။
ဘုရားသုံးဆူ ဆိုရင်တော့ ခုနှစ်ပွင့်ယူလာရမယ်။တခါလှုတိုင်း ၈ ပွင့်စီလှုမှာပေါ့။ခုနှစ်ပွင့်ယူလာရင် ရေကန်ထဲစိမ်တော့ ဆယ်လေးပွင့်။ ရှစ်ပွင့်လှု။ခြောက်ပွင့်ကျန် ထပ်စိမ် ဆယ့်နှစ်ပွင့်ဖြစ်။ရှစ်ပွင့်ထပ်လှု လေးပွင့်ကျန် ထပ်စိမ်ရှစ်ပွင့်ဖြစ်တော့ အားလုံးညီတူလှုပြီးရောပေါ့။ဟိ ဟိ ခု က ဘုရားကလေးဆူတဲ့ မတွက်တတ်ဘူးနော်
အရင်မေးခွန်း က အဲ့ဒါဟုတ်တယ် ။ကျွှန်တော် ပြန် ထွင်ထားတာ ။
X-man is so excellent!တော်လိုက်တာနော်။သူများတွေများ. ကျွန်မတို့ နဲ့ ကွာပနော်
For No3 question,… Please give the last one apple with busket to the last student. So, the last apple is in the busket after sharing them.
thit min – ur answer is right !thz …
ကျွန်မက အကုန်မှားတယ်။မုန့် ဝယ်ကျွေးပါနော်။ဟိ ဟိ။
0ယ်ကျွေးမည် လာခဲ့ လေ ။ကပ်စီး မကုပ် ပါဘူး ။
ဟုတ်ဟုတ် ကျေးဇူးပါရှင်။ခုလိုမျိုးဥာဏ်စမ်းလေးတွေကွန့် ပြီးမေးတတ်တဲ့ အနက်ရောင်မင်းသားလေးကို ကျေးဇူးပါ။နောက်လဲ အများကြီးတင်ပေးပါဦးနော်။အပျင်းပြေယုံတင်မကပါဘူး ခေါင်းပါ လေးသွားလို့ ဟိ ဟိ(စတာနော်)
ခုထပ်တင်ပေးထားတယ် ။ဥာဏ်စမ်း (၂) ပါ ။ဖြေကြည့်ပါ ။